Malok'ila tohiny sy hitohy
2011-11-01 @ 17:26 in Politika
Somary niandry kely aho dia nahatsapa fa nanaraka malok'ila indray ny Malagasy tamin'ny fanendrena ity antsoina hoe Praiminisitry ny marimaritra iraisana tamin'ny 28 oktobra 2011 lasa teo. Efa nahagaga ny maro ihany ny nivoahana anaran'olona hafa tampoka ny ampitson'ny fanaterana ireo alatsaka ho praiminisitra. Angamba ve noho izy mitondra anaram-boninahitra Jeneraly (avy ao amin'ny tafika) no tsy namoahana ny anarany teny amin'ny Paon d'or Ivato? Efa nanamarika ny tsy fankasitrahany idiran'ny avy ao amin'ny tafika ao amin'ny raharaha politika ny ao amin'ny mpanelanelana SADC. Kanjo rehefa nivoaka ny filazana ofisialy avy amin'ny Fiadidiana ny Repoblika dia nipoitra tampoka ny anarany. Na ho inona na ho inona filaza dia efa miteraka ahiahy iny.
Nandeha amin'izay ity tombatombana rehetra ity, tsy dia noraharahiako loatra satria misy ny gazety hanasongadina izay olona tiany asongadina hatrany (Mariho Pierrot Rajaonarivelo sy ny La Gazette de la Grande Ile). Ny andro ilazana ny fanendrena kosa no mahaliana amin'izay ny raharaha. Eo no ahitana ny miafina. Mandeha ny resaka ary nalaza izao hatezeran'ny Ambasadera frantsay tamin'ny mpitarika ny ankolafy Ravalomanana izao. Matoa moa nosoratana dia an-karihary (izany hoe be no nahita) ity zava-nitranga tao amin'ny Hotel Colbert tao Antaninarenina, Antananarivo, ity sy ny filazana fa tsy ho voatendry mihitsy ny avy any aminareo [Ankolafy Ravalomanana]. Hotsarovan'ny tantara io fitenenana io ary ambentin-kabary tao amin'ny Magro Behoririka Antananarivo ny ampitso Asabotsy.
Somary nahavariana moa fa raha tamin'ny 7 ora alina no nokasaina hanambarana ity voatendry ho praiminisitry ny marimaritra iraisana dia tsy tratra izany ora izany. Raha nisy ny fivoriana natrehiko dia nisy nandefa SMS ny namana iray, tokony ho tamin'ny 8 ora teo, nilaza fa Omer Beriziky no voatendry. Tsy mbola nahalala izahay teo akaiky teo hoe ofisialy ve izy io sa tsia? Adiny telo mialoha ny famoahana ny anarana izany dia efa nisy nanitrikitrika fa rangahy avy amin'ny Leader izay nisy namoaka fa lisitra faha-12 tamin'ny delegasiona notarihan'ny Andry Rajoelina azy tany Bruxelles ny jona 2009 no ho lany Praminisitra. Ny ambara ety ivelany mandritra izany fotoana izany dia mafana ny fifampiresahana eo amin'ny SADC sy Rajoelina ary miaro ny fiandrianam-pirenena Rajoelina. Izany hoe ny fahazoako azy eto dia efa tapaka ary tsy hiova amin'ny heviny intsony Rajoelina.
Nandeha ny siosio fa nanisika ny anaran'i Botozaza ny SADC, Rajoelina kosa nanitrikitrika ny Jeneraly Sylvain Rabotoarisoa, ilay kandidà nasisika. Mazava ny resaka, hoy aho. Mody nasisika ny dosien'ity jeneraly ity, izany hoe avy amin'ny tafika tsy ho eken'ny SADC dia mody miditra amin'ilay hafa tena kendrena hiditra eo (Omer Beriziky) sady tafiditra tamin'ny Lisitra avy amin'ny lazaina ho mpanohitra. Eto izany ilay malok'ila: izaho ary efa nandefitra tamin'izay tiako hotendrena! hoy angamba ny fitenenany koa aleo io no apetraka satria avy amin'ny mpanohitra ka tsy ho ekeny ve. Ny gazety Tia Tanindrazana izay voasompatra moa tamin'io fotoana io nanoratra fa UDR-C 100% ny eo amin'ny fahefana mpanatanteraka. Hoy fotsiny aho hoe tsara petrapetraka indray izany teti-panorona izany, indrindra moa ka tafapetraka soa aman-tsara ranamana io.
jentilisa 01 novambra 2011 , amin'ny 19 ora sy sasany